CAJIIB!!: Bini Aadamnimada Badbaadi Leciester City-yey Oo Liverpool Horyaalka Ka Hor Joogso-Kooxaha Premier League Oo Foxes Ku Soo Fuulay Liverpool. - Gool24.Net
CAJIIB!!: Bini Aadamnimada Badbaadi Leciester City-yey Oo Liverpool Horyaalka Ka Hor Joogso-Kooxaha Premier League Oo Foxes Ku Soo Fuulay Liverpool.
Jamaahiirta kooxda Premier League ee ka baxsan Liverpool ayaa bilaabay olole ay ku doonayaan in ay ku badhi taaraan kooxda Liecester City si ay ugu noqoto kooxda kaliye ee ay waqti xaadirkan u arkaan in ay Liverpool ka beenin karto riyadooda koobka Premier League.
Kadib markii ay kooxda Leicester City xasuuqday Aston Villa isla markaana ay guuldarooyin xun la kulmeen kooxaha Manchester City iyo Chelsea waxay taageerayaasha neceb Liverpool ay arkeen in Leicester City ay hadda u baahan tahay in ay baadbaado u samayso.
Tan iyo markii ay Manchester City lumisay tartankii ugu adkaa ee ay Liverpool kula jirtay waxaa bilawday halku dhigyo cusub oo loo adeegsanayo kooxda Leicester City si ay riyada Liverpool ee koobka Premier League u burburiyaan.
Wargayska Bleacher Report ayaa hal sawir ku soo koobay falcelintii jamaahiirta kooxaha waa wayn ee Premier League ay ku doonayaan in ay hal mar oo kale kuwada taageeraan kooxda Liecester City iyada oo sababtu tahay in Liverpool dhinaca laga noqdo.
Inkasta oo qaar badan oo warbaahinta England ahi ay waqti xaadirkan qirayaan in Liverpool ay hadda noqotay kooxda ay adag tahay in xili ciyaareedkan laga qaadi karo koobka Premier League, haddana waxaa bilawday olole lagu taageerayo Leicester City.
Hal ku dhigyada ugu caansan ee baraha bulshada lagu arkayo gaar ahaan twitterka waxaa ka mid ah erayadan: “Leicester City markale bini aadamnimada badbaadi oo Liverpool koobka Premeir League ka hor joogso”.
Waxayna taageerayaasha Liverpool erayadan u arkaan kuwo dhaliil ku ah jamaahiirta kooxaha waa wayn Premier League sababtoo ah in ay Liecester City soo taageereen markii ay kooxahoodu quus ka noqdeen koobka Premier League.
Wargayska Bleacher Report oo soo bandhigaya sida ay kooxaha waa wayn ee Premier Leauge hadda u soo wada taageerayaan kooxda Leicester City isaga oo hal meel iskugu keenay sawirada Jamie Vardy oo Leicester City u taagan, Jose Mourinho, Lacazette, Guardiola, Tammy Abrahm iyo Marcus Rashford oo dhamaantood kooxahooda ku matalaya ololaha looga soo hor jeedo Liverpool ee lagu taageerayo Liecester City.
Ma aha markii ugu horaysay ee Liverpool ay la kulantay cadaawad wayn oo ay kooxaha Premier League dhinac ka noqdeen, balse waxayba taageerayaasha Liverpool taas u arkaan wanaag wayn sababtoo ay in kooxdoodu ay la miisaan noqotay kooxaha kale oo dhan oo laysku daray.
Si kastaba ha ahaatee, Liecester City ayaa waqti xaadirkan loo arkaa in ay tahay kooxda kaliya ee cadaadiska ku sii hayn karta kooxda Jurgen Klopp oo aan ilaa hadda wax guuldaro ah ku soo arag Premier League iyada oo Man City iyo Chelsea oo dagaalka ku jiray ay si wayn hoos ugu dhaceen kulamadii ugu danbeeyay.